Farmaajo oo Ciidamada ugu baaqay in ay gutaan Waajibaadkooda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Farmaajo oo Ciidamada ugu baaqay in ay gutaan Waajibaadkooda
Farmaajo oo Ciidamada ugu baaqay in ay gutaan Waajibaadkooda
Raysalwasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliyaan Wasiirka Gaashandhiga Cabdulxakiim Maxamuud Xaaji Fiqi iyo Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdishakuur Sheikh Xassan Faarax ayaa shalay booqday xarunta taliska Ciidamada Daraawiishta ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada ay booqdeen ayaa tiradooda gaarayso 500-askari kuwaas oo mudo labo sano lagu soo tabbabaray degmada Carmo ee gobolka Bari.
Raysalwasaaraha ayaa khudbad dheer ujeediyey askartaas oo uu kaga hadlay dhinacyo badan oo ay kamid yihin soo celinta gobolada ka maqan Dawladda oo ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab,dhowrista Xuquuqdooda iyo in askarta ay iska ilaaliyaan dhaca iyo dhibaataynta shacabka.
Farmaajo ayaa askarta u sheegay in howlo shaqo badan ay horyaalan loona baahanyahay in ay kasoo baxaan isagoo carabka ku dhuftay in Xukuumadiisu ay daryeeli doonto isla markaana bixin doonto xuquuqda ay leeyihin Ciidamada,wuxuuna ka codsaday in ay caawiyaan shacabka oo aysan noqon kuwa dhibaateeya.
“…Waqti badan ayaa la idin geliyay, waad soo tababarateen, waajib culus ayaana la idinka sugayaa, dhanka xukuumadeydana wey ku dedaaleysaa sidii aad waajibaadkiina Askarnimo u heli laheydeen,Qofka dumarka ah ee waayeelka ah haddii aad aragtaan gacan qabta, oday waayeel ah haddii aad aragtaana sidoo kale gacansiiya, balse ha furanina haddii kale waxaad noqoneysaan dambiilayaal aan ku camal falin wixii la soo baray…”,ayuu sheegay.
Raysalwasaaraha ayaa xusey sidoo kale in Soomaaliya ay ku suganyihin dagaalyahano ajaaniib ah kuwaas oo ka barbar dagaalamaya kooxda Shabaab,isagoo Ciidamada u sheegay in looga baahan yahay iyaga in ay ka saaran dalka.
Saraakiisha hogaamisa ciidankaasi Daraawiishta ayaa Ra’iisul Wasaaraha u sheegay in muddo labo sano aaney wax mushaar ah qaadan ayna xukuumada ka rajeynayaan inay si deg deg ah ugu bilowdo mushaar, waxaana Ra’iisul Wasaaraha oo ka jawaabaya arrinkaasi uu u balan qaaday inay helayaan wixii xuquuq Askarinimo ah.
Xukuumada Farmaajo ayaa hore u qabsatay mudo 100-maalmood in ay wax ka qaban doonto amniga Soomaaliya iyadoo ka bilaabaysa magaalada Muqdisho,balse ilaa iyo hadda ma jiro wax horumar ah oo laga sameeyey talaabadaas waxaana gabo gabo maraaya mudada ay qabsatay Xukuumadu.